IBezzia yiwebhusayithi eyinxalenye yeqela elikhulu le-Intanethi le-AB. Iphepha lethu linikezelwe kumfazi wanamhlanje, umntu ozimeleyo, osebenza nzima enenkxalabo. Injongo yeBezzia kukwenza ukuba umfundi afumane iindaba zamva nje kwezemfashini, ezobuhle, ezempilo kunye nokubeleka, phakathi kwabanye.
Abahleli beqela lethu bakhethekileyo kwiindawo ezinje ngengqondo, ukufundisa, ifashoni kunye nobuhle okanye impilo. Ngaphandle kwamasebe abo oqeqesho ahlukeneyo, bonke babelana ngeenjongo ezifanayo, uthando lokunxibelelana. Enkosi kwiqela lokuhlela laseBezzia, kule minyaka idlulileyo iwebhusayithi yethu ibisoloko ifikelela kubafundi abaninzi nangakumbi. Ukuzibophelela kwethu kukuqhubeka nokukhula kunye nokubonelela ngowona mxholo.
El Iqela lokuhlela laseBezzia Yenziwe ngabahleli balandelayo:
Ukuba ufuna ukuba yinxalenye yeqela lokubhala laseBezzia okanye naziphi na ezinye iiwebhusayithi zethu ezijolise kubaphulaphuli ababhinqileyo, gcwalisa le fomu.
Umbhali, umguquleli, ibhlog kunye nomama. Ndazalelwa e-Barcelona kwiminyaka engamashumi amathathu eyadlulayo, ndide ngokwaneleyo ukuba ndinokuba likhoboka lobugcisa, ifashoni, umculo kunye noncwadi. Unomdla kwaye ungakhathali ngokwemvelo, soloko ulumkele ukuba ungaphoswa nayiphina into esinikwa bubomi!
Oko ndandimncinci ndandicacile ukuba into yam ibizoba ngumfundisi ntsapho. Kungoko ndinesidanga kwiPhilology yesiNgesi. Into enokudityaniswa ngokugqibeleleyo nothando lwam lwefashoni, ubuhle okanye imicimbi yangoku. Ukuba songeza umculo werock kuyo yonke le nto, sele sinemenyu epheleleyo.
Iminyaka engamashumi amathathu ubudala kunye nezifundo ezithile ezinikezelwe kwilizwe lobunjineli, zininzi izinto endizithandayo ezihlala ixesha lam. Ndafumana ithuba lokufunda enye yazo, umculo; Okwesibini, ukupheka, ndiyazifundisa. Oko ndasebenza njengesiqhuma sikamama, ndiyakhumbula ukuba ndiyonwabele le nto ndizonwabisa ngayo ngoku endinokwabelana nani ngayo ngenxa yenyani ye-Actualidad Blog. Ndiyenza ivela eBilbao; Bendihlala apha, nangona ndizama ukutyelela zonke iindawo ezinokubakho kubhaka egxalabeni lam.
Umama, utitshala wemfundo eneemfuno ezizodwa, ugqirha wengqondo kunye nothando lokubhala kunye nonxibelelwano. Umtsalane wokuhombisa kunye nokunambitheka okuhle ndihlala ndifunda ngokuqhubekayo ... ndisenza ukuthanda kwam kunye nokuzonwabisa kwam kube ngumsebenzi wam. Ungandindwendwela iwebhusayithi yobuqu ukwazi yonke into.
Ndikhangela olona hlobo lubalaseleyo lwam, ndafumanisa ukuba isitshixo kubomi obunempilo kukulingana. Ngokukodwa xa ndandiba ngumama kwaye kwafuneka ndizibuyise kwakhona kwindlela yam yokuphila. Ukomelela njengombono wobomi, ukuziqhelanisa nokufunda yeyona nto indincedayo yonke imihla ukuze ndizive ngcono kulusu lwam. Ndinomdla wayo yonke into eyenziwe ngesandla, imfashini kunye nobuhle obuhamba nam kwimihla ngemihla. Ukubhala ngumnqweno wam kwaye iminyaka ethile, ubungcali bam. Ndijoyine kwaye ndiza kukunceda ufumane ibhalansi yakho ukonwabela ubomi obupheleleyo nobusempilweni.
Ngedigri kwintengiso, eyona nto ndiyithandayo kukubhala. Ukongeza, ndinomdla kuyo yonke into enomdla kwaye intle, yiyo loo nto ndingumntu othanda ukuhombisa, imfashini kunye namaqhinga obuhle. Ndibonelela ngeengcebiso kunye nemibono yokwenza ukuba ibe luncedo kwabanye abantu.
Umfundi we-Psychology, ukubeka esweni kwezemfundo kunye nokuzonwabisa okuninzi. Enye yezinto endizithandayo kukubhala enye ibukele iividiyo kwaye ifunda yonke into enxulumene nobuhle, izithambiso, iindlela, izithambiso, njl. Ndiyathemba ukuba ndingabelana nawe ngento endiyaziyo malunga nesihloko kwaye nawe, uya kundinceda ukuba ndiqhubeke nokufunda malunga nesi sihloko ngezimvo zakho. Enkosi ngokufunda iBezzia.
Ingcali kuthungelwano lwentlalo kunye ne-Intanethi kunye nefashoni. Ndiyathanda ukugcina kunye neendaba zamva nje kunye neengcebiso ngobuhle babasetyhini. Ukuba ufuna ukukhazimla, ungathandabuzi kwaye undilandele!
I-Blogger, umyili, umphathi woluntu ... akaphumli kwaye enomdla ondizisa entlokweni yam. Ndiyayithanda imfashini, i-cinema, umculo ... nayo yonke into enxulumene nemicimbi yangoku kunye neendlela. IGalician kuwo omane amacala, ndihlala ePontevedra nangona ndizama ukuhamba kangangoko ndinako. Ndiyaqhubeka ndifunda kwaye ndifunda yonke imihla, kwaye ndiyathemba ukuba eli nqanaba litsha linomvuzo.
Ndiyingcali yeengqondo kunye nombhali, ndiyathanda ukudibanisa ulwazi kunye nobugcisa kunye nezinto ezininzi ezinokubakho zokucinga. Njengomntu, ndiyakuthanda ukuziva kamnandi ngam, ke ngoku ndiza kukunika iingcebiso ezininzi zokuba ube mhle kwaye kwangaxeshanye ulunge.
Ndazalelwa eMalaga, apho ndakhulela khona ndaza ndafunda, kodwa ngoku ndihlala eValencia. Ndingumyili wemizobo ngobungcali, nangona ukuthanda kwam ukupheka ngokulula kunye nokusempilweni kundikhokelele ekuzinikeleni kwezinye izinto. Ukutya okungalunganga ekukhuleni kwam, kwandikhokelela ekubeni ndibe nomdla ekhitshini elisempilweni. Ukusukela ngoko ukuya phambili, ndaqala ukubhala iiresiphi zam kwibhlog yam "Isigebenga seeresiphi", esisaphila ngakumbi kunangaphambili. Ngoku ndinethuba lokuqhubeka nokwabelana ngeeresiphi ezinomdla kwezinye iiblogs enkosi kwi-Actualidad Blog.
Molo! NdinguMarta, isazi ngezentlalo kwaye ndiyabathanda abantwana. Ndenza iividiyo malunga nezinto zokudlala ezithandwa kakhulu ngabancinci endlwini. Ukongeza ekuzonwabiseni, baya kuba nakho ukufumana ulwazi oluya kubanceda kwinkqubo yabo yemfundo kunye noluntu, bafunde ukunxibelelana nosapho lwabo kunye nendalo yabo ngendlela esempilweni neyonwabileyo.
Intombazana yeGeek inomdla kuthotho, iincwadi kunye neekati. Ndilikhoboka leti. Ndingumfazi waseSpanish oSpanish othanda imfashini kwaye ndicinga ukuba ndinokuzisa umbono omtsha malunga noko. Ukunqaba kwethu kusenza sahluke kwaye kufuneka sisebenzise zona, ubuntu bethu sisitshixo sempumelelo nolonwabo.
Carmen Espigares indawo yokubamba indawo
Ingcali yeengqondo, ingcali ye-HR kunye nomphathi woluntu. UGranaína wabo bonke ubomi kunye nomfunayo weenjongo zokuphumeza. Ezinye zezinto endizithandayo? Cula kwindawo yokuhlamba, ufilosofi nabahlobo bam kwaye ubone iindawo ezintsha. Umfundi onzima uhlala ekulungele ukujongana nemiceli mngeni ngoncumo olutyalwe ebusweni bakhe. Ukuhamba, ukubhala kunye nokufunda zizinto endizithandayo. Kuqeqesho oluqhubekayo kunye nokufunda ebomini, kuba ... kwaye yintoni le bayibiza ngokuba iphila ukuba asizukukwenza konke okusinika kona ...?
Imisebenzi yezandla, yezandla, yokurisayikilisha yoyilo, izipho zoqobo, umhombiso, imibhiyozo ... YONKE INDLELA YESANDLA